‘मतदान अन्तिम विकल्प हो’ - Himalkhabar.com
अन्तर्वार्ता/विचारआइतबार, फाल्गुण १८, २०७०
‘मतदान अन्तिम विकल्प हो’
उपाध्यक्षमा अत्यधिक मतले निर्वाचित हुँदा कस्तो अनुभव भएको छ ?
खुशी छु । तर यो व्यक्तिगतभन्दा पनि मंगलादेवी सिंहदेखिकोे महिला आन्दोलन, जनआन्दोलन, ‘जनयुद्ध’, मधेश र जनजाति आन्दोलनको उपलब्धिको परिणाम हो भन्ने लाग्छ । मैले महिला, युवा र आफ्नो समुदायको पनि प्रतिनिधित्व गरेकी छु ।
तपाईंलाई निर्वाचित गर्न दलहरुबीच भएको एकताले के सन्देश दिएको जस्तो लाग्छ ?
संविधानसभा अध्यक्ष पनि निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो । उपाध्यक्ष चयनमा पनि पाँच सभासद भएको दुई दल बाहेक सबै एक ठाउँमा देखिनु सहमति र सहकार्यको विकल्प छैन भन्ने सन्देश हो ।
यो परिणामले समयमै संविधान निर्माण गर्न सहज बनाउला ?
शुभ संकेत हो । तर समयमै संविधान निर्माण गर्न विगतको संविधानसभाले सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्नुपर्दछ । त्यसो भयो भने यो पटक संविधान बन्छ ।
अघिल्लो पटक संविधान बन्न नसक्नुका कारण के के हुन् ?
असहमतिका बाबजूद अघिल्लो संविधानसभामा धेरै विषयमा सहमति बनेको थियो । तर जनतालाई आवश्यक अधिकार दिन सबै दल तयार देखिएनन् । जनताको सट्टा ढुंगा, माटो, खोलानालालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर राज्यपुनर्संरचना गर्नुपर्ने तर्क आए । त्यति भए पनि प्रक्रियामा गएको भए संविधान बन्ने रहेछ ।
यो पटकचाहिं संविधान निर्माणका चुनौती के के छन् ?
मुद्दाको हिसाबले केही विषयमा सहमति बन्न बाँकी छ । फरक दर्शन र विचार भएका सभासदहरूलाई साझा दस्तावेज बनाउन केही समय लाग्नु अस्वाभाविक होइन । तर, दलहरूले संविधान निर्माणको विषयमा एकजूट भएर चुनौती सामना गर्छन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । केही उपाय लागेन भने मतदानको प्रक्रियामा पनि जान सकिन्छ । तर अहिले प्रक्रियाको विषयमा सोच्नु छिटो हुन्छ ।